ပလို့တွေ ဂျိခဲ့တုန်းက…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
History » ပလို့တွေ ဂျိခဲ့တုန်းက….	16
Posted by Thint Aye Yeik on Aug 8, 2015 in History, My Dear Diary, Photography, Travel | 16 comments
ပလို့တွေ ဂျိခဲ့တုန်းက…. 1. ရွှေယာဉ်မျှော်…. မျှော်တိုင်းတွေး…
4.ကန်သာယာဆီမှ ဇွဲကပင်ဆီသို့… မျှော်အော်သယောင်…
5.ခုံတန်းလျား > တံတားနဲ့ …ငါးမျှားတံရယ်…. တိမ်တွေကြားက ကျောက်တောင်ရယ်
6.စိမ်းစိုလှပါသော… တောတောင် ရေမြေ
7.လှေကလေးကိုလှော်… မိကျောင်းကြီးတော့ ဘွားခနဲ မပေါ်…
9.ကျနော့်ကို လှမ်းခေါ်တတ်သော အရိပ်လေး
10= ဒီပုံကိုတော့ ပြင်လိုက်တာ…အဲ့လို ဖြစ်သွားတယ်…။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်ရဲလင်းထက်တောင် အောင်ရဲလင်းနဲ့ တူသေးတာပဲ။
11.အောင်ရဲလင်းကိုယ်တိုင်ကတောင် ကျနော့်လောက် အောင်ရဲလင်းနဲ့ မတူရေးချမတူ
ဘာရယ်မဟုတ်…. မိုးတွင်းကြီး စိတ်ရူးပေါက်တုန်း…. သံလွင်နဲ့ ဇွဲကပင်ဆီ ပြေးထွက်ခဲ့တာ….
ဘာရယ်မဟုတ်… ဟိုရိုက် ဒီရိုက် ရိုက်ထားမိတာတွေရယ်ပါ….
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဖားအံ့ကိုနှစ်ညအိပ် နှစ်ခေါက်တော့ ရောက်ခဲ့တယ်။
သွားတဲ့ရက်က တိုတော့ နေရာမနှံ့စိတ်တိုင်းကျတဲ့ပုံတွေမရခဲ့။
တံတားပေါ်ကဓါတ်ပုံရိုက်လို့ အစောင့်တွေနဲ့တော့ စကားပြောခဲ့ရသေးတယ်
Alinsett @ Maung Thura says: ဘားအံကို ချစ်တယ်…
တောင်ပေါ်သား says: ကြိုက်သဗျာ ဓါတ်ပုံတွေကိုပြောတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: ငင့် လူကို တော့ ချမ်းသာ ပေးပါ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟေဟေ့။
နာလည်း ဒီ တစ်ခေါက်ပြန်ရင် အဲဒီဘက်တွေကို ပလို့ဂျိ မှာပါကွ။
နံပတ် ၅ ကို အကြိုက်ဆုံး
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ့ဘက်ကို ပလို့ဂျိ ရတာ အတော် သဘောကျနေမိ
kai says: ဖိုတိုရှောချက်က.. အနားတွေမညီဖြစ်ပြီး.. နတ်နဲ့မတူ.. ၀က်အူလိုလိုဖြစ်သွားတယ်…
အကျီ င်္လေးတော့ကြိုက်သား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ့လို ဖြစ်သွားပါတယ်ရှို
ပုံပြင်တာ တော်ချက် နော့
သဂျီး ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အကျီ င်္က . . .
NLD ရုံးချုပ်က ဝယ်တာပါ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မင်းသားလေး တနေ့တခြား ချောလာတယ်
Alinsett @ Maung Thura says: .မြှောက်ပြီ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ရှုခင်းပုံလေးတွေ လှပါရက်နဲ့ အောက်ဆုံးနှစ်ပုံရောက်တော့ နင်တောင် နင်သွားတယ်။ အဲ့၂ပုံဖြုတ်ပစ်လိုက်
အားလုံး ပြည့်စုံတယ်။ ဟိဟိ
Alinsett @ Maung Thura says: နိထက် ရှောလို့ မလိုနာ ဖြစ်နေတာ မှုတ်လား
Mike says: .ပုံလေးတွေတော်တော်လှတယ်ကွာ(အောက်ဆုံးနှစ်ပုံကလွဲရင်) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: တိန်…. တကယ်တော့… အောက်ဆုံး နှစ်ပုံက..ပိုစ့်တစ်ခုလုံးကို.. အလှ အလင်း ဖြန့် ပေးနေတာ..
manawphyulay says: နံပတ် ၅ ၊ ၇ ပိုကြိုက်တယ်။ ဘားအံကတော့ ၃ ခေါက်လောက်ပဲ ရောက်ဖူးသေးတယ်။ သာမညတောင် သွားစဉ်အခါကပေါ့… ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် ဒီရှုမျှော်ခင်းလေးတွေကတော့ ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့် အမြဲ ရင်ထဲမှာ အေးချမ်းနေတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: ဟုတ်တယ်… သံလွင် မြစ်ရယ်… အဲ့ တောင်တန်းတွေရယ်က… ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်… ငြိတယ်..ထိတယ်..